Yiya kwi uhambo enemithi Jungle uMoya: Ubizo lwe Wild slot. Phakathi ehlathini, oko ndiyasidadisa, kufumile nekhaya izilwanyana ezininzi ezinobungozi kunye izandi yayindoyikisa. le mobileslots ukusuka NetEnt ke bayotywe emihlanu kwaye 243 iindlela ukuphumelela slot.
le mobileslots Siqulunqwa NetEnt. Le nkampani iye ukudala imidlalo na esonwabisa kuphela kodwa kuza imizobo eqaqambileyo neempawu ezintsha.
namacwecwe emihlanu kwaye 243 ukuze 1,024 iindlela ukuphumelela slot, le mobileslots na playable kuzo zonke izixhobo ukusuka 20p ukuya 100 ukuba spin. yemizobo 3D Zintle ezibekwe kwihlathi apho indalo lasendle ephila. umculo Imvelaphi abe ibetha akhuthale okanye uziphumze izandi indalo. izilwanyana ezahlukileyo ezintlanu ke imiqondiso bhobhile. Ezi ingwenya, weebhere, yamaphimpi, elephants, kwaye nengwe. Liphezulu isimboli ixabiso ingwe eya kunika 150 isenti kwamahlanu payline. imiqondiso ngokuhlawula ephantsi imidiliya zigqunywe amakhadi lokudlala A, K, Q, J, kwaye 10.
Ezinye iimpawu ziquka:
isimboli Ukwandiswa- Wonke isimboli emdlalweni ngaphandle sasaza eliphawulwe ngayo mabhabhathane. Ukuba nawuphi na umqondiso uphawulwe ibhabhathane yinxalenye combo ngokuphumelela, nesimboli liya kudla ukuzalisa yonke bayotywe.
Butterfly konyusa- Lo msebenzisi ungacelwa ngokungakhethiyo emdlalweni isiseko. Butterflies Eny malunga bhobhile luwolule neempawu enye ukuya amahlanu kwi spin eliphumelelayo.
aziyeki ezamahala- icon ezintathu okanye ngaphezulu iintyatyambo evelayo naphi emdlalweni isiseko uya kuxhokonxa olu phawu. Unakho ukufumana 15 times your stake bonus if you land four scatters. kodwa, xa ufika Uchithachitha ezintlanu, ngaba ulinikiwe 50 amaxesha kwisibonda yakho yebhonasi. Wakuba eziye zanixa- olu phawu, ufumana ukudlala 1,024 iindlela ukuphumelela. Emva koko kufuneka ukhethe nayiphi na imiqondiso isilwanyana ezintlanu. Isilwanyana ukuba ukhetha uya kuba isimboli ixabiso kuphela aphezulu phezu bhobhile ngexesha aziyeki ivideo. Zonke zezilwanyana ezintlanu kuza inani elithile aziyeki simahla yaye akukho aziyeki ezisimahla singamiswa retriggered.
Tiger unika aziyeki ezine ivideo
Indlovu itshiza aziyeki ivideo ezisibhozo
ZeBhere unika elinambini aziyeki ivideo
Crocodile unika elinesithandathu aziyeki ivideo
Cobra unika ezimashumi aziyeki ivideo
Jungle uMoya: Ubizo lwe Wild baneshologu ukuya kumdlalo eliphezulu Ukunxaxha. le mobileslots iza iimpawu ezinkulu ibhonasi kunye ukhangela emangalisayo.